MODA | Article Detail | အမျိုးသမီးများအတွက် လိင်ဆက်ဆံခြင်း၏ ကောင်းကျိုးများ
အမျိုးသမီးများအတွက် လိင်ဆက်ဆံခြင်း၏ ကောင်းကျိုးများ
ဒါမျိုးတွေက အမျိုးသမီးတွေအတွက်လည်း အကျိုးရှိစေသတဲ့လား
လိင်ဆက်ဆံတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသမီးတော်တော်များများက ကိုယ့်အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုတွေများပြားစေတယ်ဆိုတာကို သိမထားကြသေးပါဘူး။ လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့ ကိစ္စဟာ ရှုပ်ထွေးမှုတွေ ရှိသလောက် ကိုယ့်ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ကောင်းမွန်တဲ့ အားသာချက်တွေရှိပါသေးတယ်။ ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ လိင်ဆက်ဆံရေးဆိုတာလည်း အမျိုးသမီးများရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် မှန်ကန်တဲ့ လိင်ဆက်ဆံရေးကြောင့် ဘယ်လိုမျိုးကောင်းကျိုးတွေရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကို သိရှိစေဖို့အတွက် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာရောဂါကာကွယ်မှုကို တိုးတက်စေပြီး ဖျားနာမှုကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ အဆုံးသတ်စနစ်အထိရောက်ရှိစေဖို့အတွက် လိင်ဆက်ဆံမှုတွေပြုလုပ်ခြင်းဟာ ရောဂါပိုးတွေ၊ဗိုင်းရပ်(စ်)တွေ၊အခြား အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အရာတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ကို တစ်ခါ သို့မဟုတ် နှစ်ခါလောက် လိင်ဆက်ဆံမှုပြုလုပ်တဲ့သူတွေဟာ လိင်ဆက်ဆံခြင်းလုံးဝမပြုလုပ်တဲ့သူတွေထက် ရောဂါကာကွယ်မှုစွမ်းရည်ပိုမိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်မှာ အသေအချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ရောဂါကာကွယ်မှု စွမ်းရည်မြင့်တက်စေဖို့အတွက် အောက်ပါလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို အထူးလိုက်နာကျင့်ကြံကြည့်လိုက်ပါဦး။
-ကောင်းမွန်တဲ့အစားအသောက်ကို မှန်ကန်စွာ စားသုံးခြင်း
-လိင်ဆက်ဆံစဉ် ကွန်ဒုံးကို အသုံးပြုခြင်းတို့ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
လိင်ဆက်ဆံပြီး အသက်ရှည်ရှည်နေရတာကို အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံးလား။လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာ သင့်ရဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုစွမ်းရည်ကို အထူးမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး သက်လုံကောင်းစေမှာလည်း အသေအချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးများအတွက် မအင်္ဂါရဲ့ စွမ်းရည်နဲ့ သွေးလှည့်ပတ်မှု၊မအင်္ဂါတင်းအားကိုလည်း အထူးမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး လိင်ခံစားနိုင်မှုကိုလည်း အထူးမြှင့်တင်ပေးစေနိုင်မှာ အသေအချာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာ ဆေးပြီးတယ်ဆိုတာကိုရော သင့်အနေနဲ့ ယုံကြည်ပါရဲ့လား။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာ နင်ကျင်မှုကို လျော့ကျစေတဲ့ ဟော်မုန်းကို လျော့ချပေးတဲ့အတွက် နာကျင်မှုဒဏ်ရာများကို အထူးကျဆင်းစေပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိမှုအရ တစ်ကိုယ်ရေအာသာဖြေမှု ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးများဟာ ခြေထောက်နာကျင်ခြင်း၊ ကြွက်တက်ခြင်း၊ လေးဘက်နာ၊ခေါင်းကိုက်ခြင်းစတဲ့ ဝေဒနာများကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဘက်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်းက စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ပူပင်သောကတွေကို ဖြေလျော့ပေးနိုင်ပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံစဉ် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ထိတွေ့ခြင်း၊ ပွေ့ ဖက်ခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သဘာဝဟော်မုန်းဓါတ်များကို ထွက်ရှိစေပြီး သင့်ရဲ့ ဦးနှောက်စွမ်းရည်ကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လင်မယားချစ်သူအချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကိုလည်း အထူးကောင်းမွန်စေပြီး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးရင်းနှီးမှုပိုမိုစေကာ ပျော်ရွှင်မှုများကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်စေမှာ အသေအချာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Zodiac Sign တွေအလိုက် အသဲကွဲတာကို ဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ကြမလဲ
ရာသီခွင်အလိုက် ဘယ်လိုအပန်းဖြေမှုတွေက ကိုယ့်အတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အသဲကွဲမှုတွေကို ကုစားပေးမလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။
Relationship တစ်ခုမှာ အကြောင်းအရာတစ်တခုခုကြောင့် လမ်းခွဲခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ စိတ်ဓာတ်ကျပြီး အသဲကွဲတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အသဲကွဲနေမယ့်အစား မိမိတို့ ရာသီခွင်အလိုက် ဘယ်လိုအပန်းဖြေမှုတွေက ကိုယ့်အတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အသဲကွဲမှုတွေကို ကုစားပေးမလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။
ဒီရာသီဖွားလေးတွေကတော့ ဘယ်တော့မှပြန်လှည့်မကြည့်တတ်တဲ့ လူတွေပါ။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတတ်တဲ့ သူတွေဖြစ်တာကြောင့် လွတ်လပ်မှုကိုပဲ အမြဲရှာဖွေနေတတ်သူတွေပါ။ ဒါကြောင့် ဒီရာသီဖွားလေးတွေ အသံကွဲတဲ့အခါမှာ ခရီးထွက်ပါ။ ခရီးထွက်ခြင်းဟာ သင်နဲ့သင့်တော်တဲ့ ကုစားနည်းပါပဲ။ သင်သွားချင်တဲ့နေရာကို တစ်ယောက်တည်းခရီးထွက်လိုက်ပါ။ Relationship ရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာ သင်ရှင်သန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကို မေ့ပစ်နိုင်တဲ့အထိ ခရီးထွက်ပါ။ ခရီးထွက်ခြင်းက Aquarius တို့အတွက် အကောင်းဆုံးသော စိတ်အပန်းဖြေနည်းလေးပါ။
တစ်ကိုယ်ကောင်းမဆန်ဘဲ အကောင်းဘက်ကပဲ မြင်တတ်တဲ့ ရာသီဖွားလေးတွေဖြစ်တာကြောင့် အသဲကွဲတယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့အခါ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ သင့်ကို အံ့သြကြပါလိမ့်မယ်။ ခံစားနေရတဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဖွင့်ထုတ်လိုက်ပြီး ကဗျာတွေအဖြစ်နဲ့ ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။ ကဗျာတွေရေးပြီး Blog တစ်ခုကို စတင်လိုက်ပါ။
သင်နဲ့ ပြတ်စဲသွားကြတဲ့ Ex တွေအားလုံးက သင့်ကို အမြဲသတိတရရှိနေကြမှာပါ။ သင့်က သစ္စာတရားကို အလေးအနက်ထားတတ်တဲ့ ရာသီဖွားဖြစ်တာကြောင့် သင့်ရဲ့ သစ္စာစောင့်သိမှုနဲ့ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ အသဲကွဲမှုတွေကြောင့် ပြိုလဲနေရတာတွေကို ၂၄ နာရီအတွင်းမေ့ပျောက်လိုက်ပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ blind date လိုက်ပါ။ ကဲ ဘာတွေကို စောင့်နေဖို့ လိုနေသေးလဲ။
သင့်ဟာ ပြတ်သွားပြီးတဲ့ Ex နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအဖြစ်ဆက်ရှိနေနိုင်မယ့် သဘာဝရှိနေသူပါ။ Ex အတွက်လည်း သင်တို့ရဲ့ ချစ်ဇာတ်လမ်းပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာ သင့်ကို သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ခင်တွယ်နေစေမယ့် ဆွဲဆောင်မှုကို တစ်မျိုး သင့်မှာရှိနေပါတယ်။ အသဲကွဲတဲ့အခါမျိုးကြုံလာခဲ့ရင်တော့ စိတ်အပြောင်းအလဲဖြစ်အောင် သင့်အိပ်ခန်းရဲ့ ပရိဘောဂတွေကို လဲလှယ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အခန်း Decoration ကို ပြောင်းလဲလိုက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သင့်စိတ်ကို အပြောင်းအလဲဖြစ်စေမှာပါ။
ဒီရာသီဖွားလေးတွေရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုက ပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့ အရိုးရှင်းဆုံးနေတတ်ခြင်းပါပဲ။ သင်ကိုယ်တိုင်လဲ သိပြီးဖြစ်မှာပါနော်။ ဒီတော့ အသဲကွဲတယ်လို့ ခံစားနေရတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ ခင်မင်ရဆုံးသူတွေနဲ့ စကားတွေပြောပါ။ ရင်ဖွင့်ပါ။ အေးချမ်းတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို တွေ့ရှိလာတဲ့အခါ အသဲကွဲခြင်းကို သင်မေ့ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီရာသီဖွားလေးတွေကတော့ သစ္စာရှိတဲ့နေရာမှာ ပြောစရာမလိုအောင် အသိအမှတ်ပြုခံထားရသူတွေပါ။ ဒါကို စမ်းသပ်ခံရတဲ့အခါ ယုံကြည်မှုကို ချိုးဖောက်ခံရတဲ့အခါ အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ အဝေးဆုံးကို ထွက်သွားတတ်သူဖြစ်တာကြောင့် အသဲကွဲတဲ့အခါ အများကြီးထပ်ပြီး မခံစားရလေအောင် အကြံပြုချင်တာလေးကတော့ Instagram , Facebook အစရှိတဲ့ Social Media ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ ပုံတွေကို အကုန်ဖျက်ပစ်လိုက်ပြီး Ex နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သူတွေအားလုံးကိုလည်း Block လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ အားလုံးအသစ်ကပြန်စပြီး သင့်ကိုယ်သင်အလှဆုံးနေထိုင်လိုက်ပါ။
သင်က အချစ်ရေးမှာ ရူးသွပ်တတ်သူတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းမှာကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့အချိန်တွေအတွက် အချိန်တိုအတွင်း အကောင်းဆုံးပြန်တည်ဆောက်နိုင်တဲ့ လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းဟာ သင့်ဘဝအတွက် ဇာတ်လမ်းတစ်ခုရတယ်လို့သဘောထားပြီး အရာရာအားလုံးကို မေ့ပစ်လိုက်ပါတော့နော်။ ဒီထက်လှပတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေလည်း ရောက်ရှိလာဦးမှာပါ။
Virgo လေးတွေက အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့အရာတွေ အသစ်အဆန်းတွေကို အမြဲရှာဖွေနေတတ်သူတွေပါ။ စစချင်းမှာတော့ အသဲကွဲတဲ့ဒဏ်ကို သင် ၂ရက်လောက်အလူးအလဲခံစားရမှာပါ။ ဒါပေမယ့်မပူပါနဲ့ သင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အရင်းနှီးဆုံးလူတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ ဒါဟာ သင့်အတွက်ဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူး။ သင့်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကို အစီအစဉ်အတိုင်းဆက်လုပ်နိုင်သွားမှာပါ။
Libra ရာသီဖွားတွေကတော့ ပြတ်သားတတ်သူတွေပါ။ အသဲကွဲရတဲ့ ခံစားချက်ကပို အကြာကြီး မခံစားတတ်တဲ့သူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ အားကစားတစ်ခုခုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ပါ။ သီချင်းနားထောင်ပါ။ ဂီတကို နစ်မျောရင်းနဲ့ သင့်စိတ်တွေလည်းနူးညံ့လာပါလိမ့်မယ်။
စိတ်မြန်လက်မြန်ရှိတတ်တဲ့ သဘာဝကြောင့် အသဲကွဲခြင်းကို အကြာကြီးမခံစားတတ်ကြသူတွေပါ။ သူငယ်ချင်းတွေ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို သင်တို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်အကြောင်းကို အားရပါးရပြောပြပြီး ရင်ဖွင့်လိုက်ခြင်းက သင့်စိတ်သက်သာရာ ရစေမှာပါ။
ပျော်ပျော်နေတတ်တာကြောင့် သင်နဲ့ လမ်းခွဲသွားတဲ့ EX တွေဟာ မိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးအဖြစ် ပြန်လည်နေထိုင်နိုင်မှာပါ။ ဒီတော့ သင်ဟာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သင့် Ex ကို သိစေဖို့အတွက် အသဲကွဲမယ့်အစား အလှပဆုံးပြင်ဆင်နေထိုင်လိုက်ပါနော်။
ပင်ကိုယ်ဗီဇအရ ရိုးသားတဲ့သဘာဝရှိတဲ့ ရာသီဖွားလေးတွေပါ။ ဒါကြောင့်လည်း သင့်ရဲ့ EX ကြောင့် စိတ်ညစ်မှုတွေကို ကြုံခဲ့ရမှာပါ။ သင့်ရဲ့ Ex နဲ့ အစစအရာရာ ဆန့်ကျင်တဲ့ လူတစ်ယေက်နဲ့ Date လိုက်ပါ။
ကဲ ဒီတော့ မိမိတို့ရာသီခွင်အလိုက် အသဲကွဲရင် ဘယ်လိုလေးတွေ လုပ်ဆောင်သင့်တယ်ဆိုတာ အကြံပေးထားပြီဆိုတော့ အသဲကွဲလို့ဆိုပြီး အိမ်တွင်းပုန်းမနေနဲ့ အကြံပြုချက်လေးတွေကို လိုက်လုပ်ကြည့်ကြရအောင်နော်။
ဂရိဝေါဟာရ သုံးလုံးနဲ့ ခွဲခြားဖော်ပြထားတဲ့ အချစ် သုံးမျိုး
ပထမဆုံးဖော်ပြထားတဲ့ အချစ်အမျိုးအစားကို ကာမရာဂနှိုးဆွပေးတဲ့အချစ်လို့ ဆိုကြတယ်
ရှေးခေတ် ဂရိတို့ရဲ့ဘာသာစကားမှာ အချစ်ကို စကားလုံး သုံးမျိုးနဲ့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဲဒီစကားလုံး သုံးလုံးကိုပဲ အချစ် သုံးမျိုးလို့ ဆိုကြတယ်။
ဒီအချစ်အမျိုးအစားကို ကာမရာဂနှိုးဆွပေးတဲ့အချစ်လို့ သိထားကြပါတယ်။
ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ဇာတ်လမ်းအစ ပထမအဆင့်တွေမှာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို အခြေခံပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချစ်ပါ။
ယောက်ျားလေး တစ်ယောက်က " ကျွန်တော် သူ့ကို ချစ်မိနေပြီဗျာ " လို့ ဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာ " သူက နတ်သမီးလေးတစ်ပါးလို လှတာကိုး " ဆိုတဲ့ နောက်ဆက်တွဲစကားလေးတွေ ပါလာတတ်ပါတယ်။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆိုရင်လည်း " ကျွန်မ သူ့ကို ချစ်မိနေပြီရှင့် " ဆိုတဲ့ စကားနောက်မှာ " သူက ထက်မြက်တယ်၊ မိသားစု နောက်ခံလည်း ကောင်းတယ် " ဆိုတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ " စကားလေးတွေ ပါလာတတ်ပါတယ်။
ဒီအချစ်အမျိုးအစားရဲ့ အားနည်းချက်က " သိသာ ထင်ရှားလွန်းခြင်း " ပါပဲ။ တခြားအချစ်အမျိုးအစားတွေ ကြားထဲမှာ ပေါ်လွင်လွန်းပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကျိုးအတွက် ဦးစားပေးလွန်းခြင်းပါပဲ။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူ ကောင်းဖို့ထက် ကိုယ်ကောင်းဖို့ကို ပိုရှေးရှုတယ်။
" မင်းကို ကိုယ်ချစ်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မင်းက ကိုယ့်ကိုပျော်ရွှင်စေတယ်၊ မင်းနဲ့အတူ ရှိနေရတာကို ကျေနပ်တယ် " ဆိုတဲ့ စကားတွေဟာ ဒီအချစ်ကို ကိုယ်စားပြုထားတဲ့စကားတွေပါ။
ဒီအချစ်က ကိုယ့်ကိုပျော်ရွှင်စေမှုဆိုတဲ့ ယူဆချက်ပေါ်မှာ လုံးလုံးလျားလျား တည်နေပါတယ်။ ကိုယ့်ကို ပျော်ရွှင်မှု မပေးနိုင်တော့တာနဲ့ ဒီအချစ်က ချက်ချင်း ပျက်ပြယ်သွားတတ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်သားက တကယ် ချစ်မြတ်နိုးနေတယ်ဆိုရင်တောင် တစ်ဖက်လူရဲ့အချစ်ကို မယုံကြည်တော့ပါဘူး။ ဒီအချစ်က " ငါ " ဆိုတဲ့ အတ္တတစ်ခုတည်းပေါ်မှာပဲ လုံးဝ အခြေခံထားတာပါ။ " အချစ်စစ် အချစ်မှန် " ဆိုတာ ဒီအချစ်အမျိုးအစားထဲမှာ လုံးဝ မပါဝင်ပါဘူး။
အချစ်စစ်ရဲ့ သဘောသဘာဝက သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် မျှအောင် တွေးပေးတတ်ရတယ်။ တစ်ယောက်အကြောင်းကို တစ်ယောက်က ကောင်းကောင်းသိပြီး ကောင်းတာတွေရော ဆိုးတာတွေပါ လက်ခံပေးနိုင်ရတယ်။
လေပြည်လေညင်းရဲ့ရနံ့ကို အတူရှူရှိုက်ပြီး မုန်တိုင်းကိုလည်း အတူအံတု နိုင်ရပါတယ်။ ဒီအချစ်က အချစ်စစ် အချစ်မှန်နဲ့ လုံးဝ ဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲ။ အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်းတွေရဲ့ စမ်းသပ်မှုကို မခံနိုင်တဲ့အတွက် ရေရှည်မခံတတ်ပါဘူး။
ဒီထက်မြင့်မားတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပုံသဏ္ဌာန် Philos Love အဆင့်ကို ရောက်ဖို့လည်း မလွယ်ပါဘူး။ ကူးပြောင်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ရေရှည်တည်မြဲနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချစ်ကြောင့် အောင်မြင်ပေါက်မြောက်သွားတဲ့သူဆိုတာ ရှားပါးလွန်းပါတယ်။ တချို့က ဒီအချစ်ကို " ဘဝပျက်ဖို့ လမ်းစ " လို့တောင် ဆိုပေရဲ့။
2. Philos Love
ဒီအချစ်အမျိုးအစားက လူနှစ်ဦးရဲ့ ခင်မင်မှုအပေါ်မှာ အခြေခံထားတာပါ။
ဒီအချစ် ဖြစ်ပေါ်မလာခင်မှာ ကြာရှည်တဲ့ခင်မင်မှုတွေ ဖြစ်တည်ရတယ်။
မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမား စတဲ့ အမျိုးအစားတွေမှာ ဒီအချစ် ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။
မိသားစုဝင် အချင်းချင်း ချစ်မြတ်နိုးတာဟာလည်း ဒီအချစ်ထဲမှာ အကျုံးဝင်ပါတယ်။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ခင်မင်တဲ့အချိန်တွေ ကြာမြင့်လာပြီး ဆိုးကွက်၊ ကောင်းကွက်တွေကို အတွင်းကျကျ သိလာမယ်။ အချိန်အများစုကို သူနဲ့အတူ ကုန်ဆုံးလာပြီး လေးနက်တဲ့ခံစားမှုတွေ တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် ဖြစ်ပေါ်လာမယ်။ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် ပိုကြင်နာလာမယ်။ ပိုသည်းခံလာမယ်။ သူ ပေါ်မလာရင် လွမ်းတဲ့ ဝေဒနာလေးတွေ စတင်ခံစားလာရတော့မှ ချစ်နေမိပြီဆိုတာကို ကိုယ်တိုင် ရိပ်မိလာတတ်တာမျိုးပါ။
ဒီလို ခင်မင်မှု၊ နားလည်မှုတွေ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် တက်လာပြီးမှ ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ အချစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့် ရေရှည်ခိုင်မြဲတတ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့ အချက်တစ်ခုကတော့ ဒီအချစ်က ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တစ်ခုတည်းကိုပဲ အားပြုထားတာမဟုတ်လို့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နားလည်မှုတွေကို ပိုမိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင် Eros မှာလိုမျိုး ရယူဖို့ တစ်ခုတည်းကိုပဲ အသားပေးထားတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ကလည်း ယူမယ်။ သူ့ကိုလည်း ပေးမယ်ဆိုတဲ့ အပေးအယူမျှတတဲ့အချစ်မျိုးပါ။ အပြန်အလှန် ဆက်နွှယ်နေတဲ့သဘောကို ဆောင်ပါတယ်။
Eros အထက်မှာ Philos ရှိသလိုမျိုး Philos အထက်မှာလည်း နောက်တစ်ဆင့် ရှိပါသေးတယ်။ Agape လို့ ခေါ်တယ်။ အချစ်အမျိုးအစားထဲမှာ အဆင့်မြင့်ဆုံးအချစ်ပါ။
ဒီအချစ်က ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့်နဲ့ အမြင့်ဆုံး အဆင့်ပါ။
" ငါ " ဆိုတဲ့ ရှုထောင့်ဘက်ကနေ လုံးဝ မကြည့်ဘဲ တစ်ဖက်သားကိုသာ အလေးထားတဲ့ အချစ် အမျိုးအစားပါ။
အကြွင်းမဲ့အချစ်၊ အနှိုင်းမဲ့အချစ်လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။
တစ်ဖက်သားရဲ့ အပြောအဆို၊ အပြုအမူတွေက ကိုယ့်အပေါ် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဖြစ်နေပေမယ့် သူ့အပေါ်ထားရှိတဲ့ မေတ္တာတရားကို လုံးဝ မထိခိုက်၊ မလျော့ပါးစေနိုင်ဘူး။ သူက ဘယ်လိုပဲ စော်ကားလာလာ သူ့အပေါ် မုန်းစိတ်ဖြစ်ပွားမလာဘဲ သူ့ကောင်းကျိုးကိုသာ လုပ်ဆောင်ပေးချင်တဲ့ အချစ်မျိုးပါ။ သားသမီးဆီက အကျိုးရလဒ် တစ်စုံတရာပြန်ရဖို့ကို မမျှော်လင့်ဘဲ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးတဲ့ မိဘတွေရဲ့အချစ်ဟာလည်း ဒီအချစ်ထဲမှာ အကျုံးဝင်ပါတယ်။
ဒီအချစ် သုံးမျိုးကို အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင် Eros က Physical သဘောနဲ့ ဆက်နွှယ်ပါတယ်။
Philos က Mental သဘောနဲ့ ဆက်နွှယ်ပါတယ်။
Agape ကတော့ Spiritual သဘောနဲ့ ဆက်နွယ်ပါတယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို လေးမျိုး ခွဲပြထားတယ်။ နောက်ဆုံး ဖော်ပြထားတဲ့ အချစ်ကတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲနော်။
အချစ်ဆိုတာ သတ္တဝါချင်း ထားရှိတဲ့ ခံစားမှုတစ်မျိုး၊ လူတစ်ဦးက တခြားလူတစ်ဦးအပေါ် ဒါမှမဟုတ် ပစ္စည်းတစ်ခုခုအပေါ် ထားရှိတဲ့ ခံစားမှုတစ်မျိုးပါ။
အချစ်စိတ်ကြောင့် အဲဒီခံစားမှု ထားရှိမိတဲ့သူအပေါ် ဒါမှမဟုတ် ပစ္စည်းအပေါ်ကို တခြားလူ၊ တခြားပစ္စည်းတွေထက် သာလွန်တဲ့ ဂရုစိုက်မှုတွေ ပေးတတ်ပါတယ်။
ဒီအချစ်ပေါ်ကို အခြေခံပြီး ယဉ်ကျေးမှုတွေ ပေါင်းစပ်ကုန်တတ်တယ်။
အချစ်အပေါ် ထားရှိတဲ့ ယူဆချက်၊ သဘောထားတွေဟာလည်း အချိန်တစ်ခုကို လိုက်ပြီး အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်။
အချစ်ဟာ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဘာသာဗေဒ ကွဲပြားမှုတွေကို ကျော်လွန်တဲ့အထိ ကျယ်ပြန့်လာတဲ့အတွက် အချစ်ကို ' လူသားတိုင်း နားလည်နိုင်တဲ့ ဘာသာစကား ' လို့ ပြောစမှတ် ပြုထားပါတယ်။
ချစ်ခြင်းကို အမျိုးအစား လေးမျိုးခွဲပြီး ပြောရရင် -
၁။ လုံခြုံခိုင်မြဲတဲ့အချစ် (Security Love)
လူတိုင်း အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက် ဒီအချစ်က လိုအပ်လှပါတယ်။
ဒီအချစ်မျိုးနဲ့ ချစ်ခံရတဲ့သူက ဂရုစိုက်မှုတွေရပြီး ပြုစုပျိုးထောင်ခံရတာမျိုး၊ မြေတောင်မြှောက်ပေးခံရတာမျိုးကို ရရှိတတ်ပါတယ်။
တချို့ပညာရှင်တွေက ဒီအချစ်ဟာ မိဘက သားသမီးအပေါ်ထားရှိတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုးလို့ ဆိုပါတယ်။
၂။ မိတ်ချစ်ဆွေချစ် (Friendship Love)
ဒီအချစ်က တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ရိုးရိုးသားသား၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ချစ်ခင်ကြတဲ့၊ ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ အချစ်မျိုးပါ။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဒီလိုအချစ်ဟာ တခြားလူ အနည်းငယ်ပေါ်မှာပဲ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ လူအများစုနဲ့ မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ် အဆင့်ရောက်ဖို့ လွယ်ကူပေမယ့် မိတ်ချစ်ဆွေချစ် အဆင့်ကို ရောက်လာဖို့ကတော့ ခဲယဉ်းလွန်းပါတယ်။
နောက်တစ်ခုရှိသေးတာက ဒီအချစ်မျိုးဟာ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်ချင်းကြားထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်ဖို့လည်း ခဲယဉ်းလွန်းပါတယ်။ ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို ဒါမှမဟုတ် ကောင်မလေးက ကောင်လေးကို ခါတိုင်းထက်ပိုလွန်တဲ့ ဂရုစိုက်မှုတစ်ခုခု ပေးလိုက်တာနဲ့ ဒီအချစ်အမျိုးအစား ပုံသဏ္ဌာန်ပျက်ပြယ်သွားပြီး တခြားပုံသဏ်ဏ္႑ာန်အဆင့်ကို ကူးပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်။
၃။ စိတ်ကူးယဉ်အချစ် (Romantic Love)
ဒီအချစ်က မျှော်လင့်ချက်တွေ တစ်လှေကြီးနဲ့ ချစ်မိသွားတဲ့ အချစ်မျိုးပါ။
လူ့ဘဝရဲ့ဆယ်ကျော်သက် ကာလတွေမှာ လူအများစု ကြုံတွေ့ကြရတဲ့အချစ်ဟာ ဒီအချစ်မျိုးပါပဲ။
အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ်ချစ်မိသွားမယ့်သူကို မြင်လိုက်တာနဲ့ ဒူးတွေ အရမ်းတုန်၊ ရင်တွေ ဗရမ်းဗတာခုန်ပြီး မြင်မြင်ချင်း ချစ်မိသွားတယ်ဆိုတဲ့ အချစ်မျိုးပေါ့။
လူအများစုဟာ ကိုယ်လက်ထပ်မယ့်သူကို စိတ်ကူးထဲမှာ မျိုးစုံပုံဖော် တွက်ချက်ထားပေမယ့် တကယ့်တကယ် လက်ထပ်ဖြစ်တဲ့ အခါကျတော့ ကိုယ်မျှော်လင့်ထားတာနဲ့ တက်တက်စင် လွဲနေတာမျိုးတောင် ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီအချစ်မှာလည်း အဲဒီလိုအဖြစ်မျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အကြောင်းက ရမ္မက်စိတ်တွေနဲ့ ရောပြွန်းနေတာမို့ ဆင်ခြင်ဉာဏ်ပါဝင်မှု ရာခိုင်နှုန်း နည်းပါးလွန်းနေတတ်တာကြောင့်ပါ။
၄။ အနှိုင်းမဲ့အချစ် (Unconditional Love)
ဒီအချစ်က ထာဝရ ခိုင်မြဲတည်တံ့တဲ့၊ ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ အချစ်မျိုးပါ။
ဒီလိုအချစ်မျိုးက ပေါ်ပေါက်ဖို့၊ ရှာတွေ့ဖို့ ခဲယဉ်းလွန်းပါတယ်။ ပေါ်ပေါက်ဖြစ်ထွန်းလာပြီဆိုရင်လည်း ဘယ်အရာကမှ မဖျက်ဆီးနိုင်တော့ပါဘူး။
ကတောက်ကဆ ဖြစ်တာတွေ၊ အထင်လွဲတာတွေ၊ သဘောထား မတိုက်ဆိုင်တာတွေ အားလုံးက ဒီအချစ်အောက်မှာ ကျိုးကြေပျက်သုဉ်းကုန်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေတို့ကော ဘယ်လိုအချစ်အမျိုးအစားနဲ့ တွေ့ကြုံနေကြရပြီလဲ။
FRIEND ZONE ထဲက ဘယ်လိုရုန်းထွက်မလဲ
Friend zone ထဲမှာ တဝဲလည်လည်ဖြစ်နေတဲ့ အမျိုးသားတွေ အတွက် ဒီအချက်လေးတွေကို လိုအပ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
You are just way to nice to her.
သူပျော်ဖို့အတွက်ပဲကြည့်နေပြီး သူပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်ဆို ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရ ကျေနပ်နေတတ်တယ်။ ဒီအချက်က သူအတွက် သိပ်ကိုကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းအဆင့်ပဲရှိနေမှာပါ။ မိန်းကလေးတွေရဲ့ သဘာဝအရ ကြင်နာတတ်တဲ့ ချစ်သူမျိုးလိုချင်ကြပေမယ့် ဒီလိုပြောဆိုဆက်ဆံတာတွေက သူမအတွက် ဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူးလို့ထင်တတ်ကြပါတယ်။
သူ့ကို အပြင်သွားဖို့ခဏခဏခေါ်တာ၊ Chat box ကနေ တစ်ချိန်လုံးစကားသွားပြောတာမျိုးက သူ့အတွက် စိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းတဲ့အပြင် Creepy Guy တစ်ယောက်လို့ မြင်လာနိုင်ပါတယ်။
Show Signs of Jealousy and Possessiveness
အခြားသူငယ်ချင်းတွေနဲ့Hang out လုပ်တဲ့အချိန်တွေ၊ အခြားကောင်လေးတွေနဲ့အတူရှိနေတဲ့အချိန်တွေမှာ သဝန်တိုမှုကို ပြတာက သူမ အတွက် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းစာရင်းထဲ သွင်းခိုင်းလိုက်သလို ဖြစ်ပြီး ဆက်ဆံရေးကို ပိုပြီး ေဝးကွာစေပါတယ်။
You Respect her too much
သူ့အတွက် အမြဲတမ်းလိုလို yes ဖြစ်နေတတ်ပြီး သူမ လုပ်ချင်တာ လိုက်လုပ်တာ၊ သူမကို ဦးစားပေးလွန်းတာက သူမအတွက် ဆွဲဆောင်မှုလျော့ပြီး ရည်းစားတော်ဖို့ကို စဉ်းစားသွားစေပါတယ်။
Start Hangingout with other woman
အခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့လျှောက်သွားဖို့မတုန့်ဆိုင်းပါနဲ့။ သူတို့အတွက် လိုအပ်တဲ့လူတစ်ယောက် အနားမှာ မရှိတော့တာကို ခံစားရစေပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းများပြီး လူမှု့ဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့ ကောင်လေးမျိုးက သူ တို့အတွက် စိတ်ဝင်စရာကောင်းစေပါတယ်။
သင့်အတွက် သူမ မနာလိုဖြစ်မှုက သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ ပုံမှန်ခေါ်နေကျ အချိန်မျိုးမှာ မလိုက်နိုင်ဘူးငြင်းတာမျိုး၊ အလုပ်က ကောင်မလေးနဲ့ ညစာသွားစားမလို့ဆိုပြီး ပြောပါ။ အားနာတာမျိုး၊ အတင်းတောင်းပန်တာမျိုး ကြောင်တောင်တောင် စကားမျိုး မပြောမိအောင် သတိထားသင့်ပြီး ပုံမှန်စကားပြောနေကျ အထာနဲ့ပြောဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ “နောက်မှ သွားကြတာပေါ့” ဆိုပြီး အနည်းငယ် ချေတတ်ဖို့လိုပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ သူမ ဘယ်လို Jealous ဝင်နေမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရုံပါပဲ။
Tell her about all the other girls who are chasing you
ကဲ ဒီနေရာမှာ တစ်ခုသတိထားရမှာက အရမ်းမပိုသွားဖို့ပါ။ ကောင်မလေးတချို့ သင့်ကို လိုက်ကြိုက်နေတာမျိုးရှိတယ်ပြောပြပြီး အကြံဉာဏ်တွေတောင်းကြည့်ပါ။ သူမအနေနဲ့သင်က ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ဆိုတာ သတိထားမိသွားပြီး သင့်ကို စိတ်ဝင်စားမှုတိုးလာစေမှာပါ။
သူမ အသားကို ထိတွေ့ကိုင်တွယ်တာမျိုး၊ စနောက်တာတွေနဲ့သူ့အနား ပွတ်တီးပွတ်တတ် ပြုလုပ်တာမျိုးက သူမကို ရင်ခုန်စေပါတယ်။ အနည်းငယ်ထိတွေ့ဖို့အတွက် ကြောက်မနေပဲ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ရင်ခုန်အောင်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါ။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ Friendzone ထဲရောက်နေတဲ့ ချိဖတို့စတင်လှုပ်ရှားဖို့နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ ရလောက်ပါပြီနော်။ တုန့်ဆိုင်းမနေပဲ အမြန်ဆုံး လှုပ်ရှားဖို့ကို အကြံပေးချင်ပါတယ်။